Muuqaalka aan ugu jeclahay, in kastoo, uu leeyahay meel aad u badan oo ka fog PC-yada iyo isha shabakadda. Markasta oo aan dhammeeyo mashruuc, halkaas ayaan ku nuqulli lahaa. Mar kasta oo aan soo dejiyo oo aan rakibo softiweer, halkaas ayaan ku soo guuriyay, iyo mar kasta oo aan doonayo inaan wax la wadaago kombiyuutarrada - waxaan si fudud ugu gudbinnaa feylasha qaybta u dhexeysa dhammaantood. Maya 'faylal wadaag', ma jiro rakibis saxanno, wax dhibaato ah haba yaraatee ma jiraan.
Sannad iyo badh ka dib oo hadda mid ka mid ah macaamiishaydu wuxuu i weydiistay inaan xoogaa falanqeyn ah ugu celiyo isaga. Waxay ahayd muddo aad u dheer oo aanan xitaa haysan codsiyada mar dambe la raro. Toddobaadkii dhammaaday, waxaan ku booday qaybta oo dib ayaan u soo rogay codsiyada. Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan soo dejiyey falanqeyntii hore waxaanan awood u yeeshay inaan ka baxo falanqaynta galabta. Dib-u-barashada naftayda dalabku wuxuu ahaa qaybtii ugu adkayd!